Tsy azo ekena ny fandanindaniana foana ny volan’ny mpiasa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy azo ekena ny fandanindaniana foana ny volan’ny mpiasa
Rasolonjatovo Willy il y a 20 jours
Nanao hetsika teny Antaninarenina ny Randrana sendikaly ny alakamisy 7 oktobra. Hetsika nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa Mendrika.
7 oktobra andro iraisam-pirenena ho an’ny asa mendrika. « Fiahiana ara-tsosialy aty amin’ny orinasa tsy miankina » io no lohahevitra nofidian’ny randrana sendikaly amin’ny fankalazana izao. Nofidiana io lohahevitra io satria tena mbola tsy mendrika ny asa eto Madagasikara hoy i Barson Rakotomanga sekretera jeneralin’ny randrana sendikaly. Asa mamokatra, fanajana ny lalàn’ny asa, fiahiana ara-tsosialy ary ny dialogue sociale. Ireo ny mandrafitra ny atao hoe asa mendrika. Ny fiahiana ara-tsosialy eto amintsika anefa dia tandindomin-doza. « Fantatsika vao navoakan’ny didim-pitsarana teo fa nahodinkodina ny volan’ny mpiasa tao amin’ny Cnaps ». Tsy vitan’izay ihany fa zarazaraina amin’ny zavatra tsy misy dikany ny volan’ny mpiasa, omena 150 000 000 Ar isan-taona ny mpanazatra ny Barea teo aloha. Mbola tsy fantatra ny ho avin’ny vola tany amin’ny Air Madagasikara, Air Madagasikara tsy mihodina, lanitr’i Gasikara mbola tsy misokatra. Ary ny tena mampatahotra dia tafiditra indray amin’ny fanaovana ilay fond souverain indray ny Cnaps. Tsy azo ekena ny fandanindaniana foana ny volan’ny mpiasa. « Atsaharo aloha ny fifanarahana amin’io mpanazatra ny Barea taloha io » hoy ireto mpikambana ao amin’ny Randrana Sendikaly, satria fandanindaniam-poana ny volan’ny mpiasa, tsy ahazoana tombontsoa fa fatiantoka no betsaka. Tsy misy volan’ny Fanjakana ao amin’ny Cnaps fa volan’ny mpiasa no ao.
Mila averina ny vola nalaina tao amin’ny Cnaps satria amin’izao fotoana dia hita fa miezaka ny mpitantana ao amin’ny Cnaps manakely ny vola omena ny mpiasa. Mila amboarina tsara ihany koa ny lalàna mifehy ny asa eto amintsika, atao amin’ny an-tsipirihany sy mazava tsara mba ialana amin’ny fifamaliana sy ny disadisa. Manaraka ny lalàna fotsiny dia milamina ny rehetra.
Iaraha-mahalala ny zava-misy eto amintsika raha resaka asa no lazaina, mbola tsy zarizary, azo lazaina fa tsy asa mendrika. Ny asa anefa no mitondra vokatra amin’ny fampandrosoana, tsy mahagaga isika raha mahantra tahaka izao, izay hamaha olana no andrasana, fa tsy ny mpitondra olana.